Akụkọ - Na-ehichapụ Kedu, Ebee, Ihe kpatara ya & Otu
N'ụwa niile ọkachasị ihicha teknụzụ akwa
Na 2009 spunlace na-eduga ụda 358,600 na $ 5.5 na ahịa, ihe dịka ọkara nke ahịa niile. Nke a na-esote airlaid, nke nwere mpịakọta nke ụda olu 188,287 na ire ere ruru ijeri $ 2.3 na 2009. Teknụzụ ndị ọzọ dị mkpa gụnyere carded, wet wet, spun tọrọ, agịga ogwu na ihe ndị mejupụtara. N'ihe banyere atụmatụ CAGR maka oge 2009-14, a na-atụ anya na ndị nwere ọnụ ọgụgụ ga-enwe CAGR kachasị elu na 8.5%, na ngalaba ahụ na-eto n'elu obere isi. Ihe na-eso nke a bụ ntụgharị na 6.7%, gbanyere na 5.1% yana agịga agịga na 4.9%.
Ngwaahịa kachasị site na teknụzụ na teknụzụ ikuku na-ehichapụ yana na-ehichapụkwa isi ahịa bụ maka nhichapụ mmiri.
Nchọpụta zuru ụwa ọnụ maka akọrọ / mmiri na-ehichapụ
A na-enye onye na-eri ya mmiri ma ọ bụ nke a na-ehichapụ mmiri ka ọ bụrụ mmiri mmiri, ma a na-enye nhicha akọrọ na-akọrọ, na nghọta na onye na-azụ ahịa ga-agbakwunye mmiri mmiri ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Na 2009, mmiri ehichapụ nyere onyinye gburugburu 71% nke ngụkọta nhichapụ ahịa. Ka oge na-aga, a na-ebu amụma ehichapụ akọrọ iji jiri nwayọọ nwayọọ nweta òkè ahịa, na-eto site na 29% na 2009 ruo 30% na 2014. 
Ngwa maka ihicha akwa :
• Osisi Pulp: Ọ bụ isi ihe eji arụ ọrụ maka mpaghara mmiri mmiri. A na-ejikwa osisi pulp na spun lace - usoro ihe mejupụtara / ngwakọ dịka "Spun-Pulp-Spun" SPS ma ọ bụ "Spun-Carded-Spun" SPC. Ọ bụkwa ọkacha mmasị maka teknụzụ "airlaid paper" (obere eriri)
• Polyester: Ọ bụ obere fiber maka teknụzụ carded. Dị ka
kwa na ngwa ahụ ma na-ehichapụ edemede ụdị ngwakọta dị iche. Nọmalị na-ehichapụ Industrial si 100% Polyester. A na-eme atụmatụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 43% nke eriri ahụ na-eri na lace.
• Viscose: Ọ bụ eriri ọzọ a na-ahụkarị maka ihichapụ, karịsịa maka nlekọta onwe onye. A na-eji nhichapụ nlekọta onwe onye na akụkụ ndị nwere mmetụta dị ukwuu - nlekọta ụmụaka, ihu ihu na wdg. Ọ ghaghị ịdị nro, dị nro na silky. Viscose fiber nwere ihe ndị a niile n'ihi na ihe ndị a, a na-akpọ ya "art silk" na ụlọ ọrụ textile. Ndị na-emepụta ụlọ ọrụ na-abụghị ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ịmepụta nhichapụ nke ga-agba agba. Ka ịmepụta a
flushable nonwoven ngwaahịa, nri Nchikota nke ike, mfe gbasaa na dispersion a chọrọ. A ga-ewere nke ọma n'ezie nhichapụ ga-abụ ihe na-emebi emebi. Ihe nhicha nke sitere na viscose fibers nwere ihe ndị a niile ma si otú a nwee ike ịkọ ngwaahịa nwere ngwaahịa ndị nwere ike ịsacha.
Ezigbo ụlọ na-ejikarị polyester na viscose agwakọta agwakọta, polyester bụ isi ihe.
• owu: Omume gburugburu ebe obibi tinyere ọnụ ahịa na-abawanye
na ụkọ na ihe asọmpi emeela ohere ahịa siri ike maka owu na ụlọ ọrụ na-enweghị ihe ọ bụla n'ime afọ abụọ gara aga, ọkachasị n'ahịa a na-ehichapụ ebe owu nke mgbakwunye nwere ike ịkwalite ikike na ume. Owu na-ekpori ndụ n'otu ebe aha nwa na-ehichapụ ahịa, viscose na-anọgide na-abụ eriri kachasị n'ọtụtụ ngwa ngwa, n'agbanyeghị ụkọ ọkọnọ ụwa nke kpatara ọnụahịa.
Wipes azụmahịa - Nweta ngwongwo na atụmatụ:
Ndị na-ehichapụ ákwà na-amalite azụmaahịa site na ịbuga ndị na-ehichapụ ihe nhichapụ ma ọ bụ ndị na-atụgharị ihe na-ehichapụ. Ndị na-atụgharị ihe na-ehichapụ ndị na-agbanwe agbanwe mgbe ha gbanwere na-ere ngwaahịa ha na aha ha. Ọ bụ ezie na ndị na-atụgharị aha ndị na-agbanwe ihe na-eme ntụgharị maka ụfọdụ ndị ọzọ na-ehichapụ ihe na-ehichapụ ma ọ bụ maka ụfọdụ ndị na-ere ahịa dị ka Wal-Mart. N'ime oge ndị na-ehichapụ ákwà na-amalitekwa ihichapụ ntụgharị na ụlọ, ọzọ maka akara aka ma ọ bụ maka ụfọdụ na-ehichapụ ụdị ..
Mpaghara ndị mepere emepe dịka US, Western Europe na Japan ga-aga n'ihu na-eduga ahịa nhichapụ ụwa n'ihi ọnụ ọgụgụ ndị bara ọgaranya na usoro ibi ndụ lekwasịrị anya na ngwaahịa ịchekwa oge. Mpaghara mmepe dị ka China na India ga - egosiputa uto ngwa ngwa maka ihichapụ - n'ihi mmeba ụlọ ọrụ mmepụta ihe na - eduga iji gosipụta mmụba akụ na ụba.
Ohere maka uto di ka ha gh’eme site n’iwebata ngwaahịa ọhụrụ. Ndị na-ehichapụ ákwà na-arụsi ọrụ ike iji jide n'aka na ndị ahịa ha na-ehichapụ nwere ọtụtụ nhọrọ mgbe ọ na-abịakwute ngwaahịa ndị na-eme ka gburugburu ebe obibi.
Nlekọta ụmụaka nwere ike igosipụta mmalite nke ahịa ndị na-abụghị nke; ndị ahịa ahụ na-abanye ugbu a n'ụdị na-aba uru karị iji gbasaa ojiji nke ihichapụ karịa ụmụaka ma na-agakwuru ụmụaka toro eto na ndị mụrụ ha. Obere ọrụ ha na ịdị mma ha, yana akụkụ ịdị ọcha nke otu ojiji ha, emeela ka ha bụrụ ndị ama ama na ụdị ndị ahịa niile. O doro anya na ehichapụ bụ akụkọ ihe ịga nke ọma na akụ na ụba na ụlọ ọrụ ngwaahịa na nke onwe anyị ma anyị nwere ike ịkọ na ina maka ngwaahịa ndị a ga-aga n'ihu na-eto.